Ukuqulunqa i-Molecular Formula esuka kwi-Formula elula
I-molecular form of a compound dwelisa onke amanqaku kunye nenani lee-athomu nganye yelungu elenziwe ngokwenene. Ifomula elula kakhulu ifanayo apho zonke izinto zidweliswe, kodwa iinombolo zihambelana nezilinganiso phakathi kwezinto. Oku kusebenza ingxaki ibonisa indlela yokusebenzisa ifomula elula kakhulu yenkomfa kwaye i- mass molecular to find the formula .
I-Formula ye-Molecular evela kwiNgxaki elula kakhulu yeFormula
Ifomula elula kwi vithamini C yi C 3 H 4 O 3 . Idatha yokuhlola ibonisa ukuba ubuninzi be-molecule ye-vitamin C bu malunga ne-180. Yintoni i-molecule ye-vitamin C?
Okokuqala, kubala isixa semimandla ye-athomu yeC 3 H 4 O 3 . Khangela phezulu i- atomic mass for the elements kwi- Table Periodic . Izibalo ze-athomu zifumaneka ukuba zi:
H ngu 1.01
C ngu 12.01
Ukufakwa kwezi manani, isisombululo sezibalo ze-athomu zeC3 H 4 O 3 yi:
3 (12.0) + 4 (1.0) + 3 (16.0) = 88.0
Oku kuthetha ukuba ubuninzi be-vitamin C buyi-88.0. Thelekisa ubunzima befomula (88.0) ukuya kumlinganiselo weeyunyuli (180). Ubunzima be-molecule buphindwe kabini inqwaba yesisombululo (180/88 = 2.0), ngoko ifomula elula kakhulu kufuneka yandiswe ngu-2 ukuze ifumane i-molecular formula:
i-vitamin C ye-molecule = = 2 x C 3 H 4 O 3 = C 6 H 8 O 6
Iingcebiso zeengxaki zokusebenza
Ubunzima beemelemitha eziqhelekileyo ngokuqhelekileyo bunele ukufumana ubuninzi befomula , kodwa izibalo zithatha ukuba zingasebenzi 'ngisho' njengolu mzekelo.
Ukhangele inani elifutshane elisondeleyo ukuphindaphinda ngobunzima befomula ukuze ufumane ubunzima be-molecule.
Ukuba ubona ukuba umlinganiselo phakathi kwe-mass mass kunye ne-molecular molecule ngu-2.5, unokuba ukhangele umlinganiselo we-2 okanye we-3, kodwa kunokwenzeka ukuba uzakufuna ukuphindaphinda ubuninzi be-formula. ukufumana impendulo echanekileyo.
Ingqondo efanelekileyo ukujonga impendulo yakho ngokwenza izibalo (ngamanye amaxesha ngaphezulu kweyodwa indlela) ukubona ukuba yeyiphi ixabiso elikufutshane.
Ukuba usebenzisa idatha yokulinga, kuya kuba nephutha kwi-molecular mass calculation. Ngokuqhelekileyo izixhobo ezibelwe kwi-lab setting ziza kuba nama-2 okanye amathathu, kungekhona amanani aphezulu anjengo-5, 6, 8, okanye-10 (nangona la maxabiso enokwenzeka, ngokukodwa kwilebhu yekholeji okanye ukuhlala kwehlabathi langempela).
Kufanelekile ukukhomba, ngelixa iingxaki zeokhemisti zisebenza ngokusebenzisa iifomula ezilula kunye nezilula, iimveliso eziqhelekanga azilandeleli rhoqo imigaqo. I-Atom ingabelana ngama-electrons anokuba ama-ratios ka-1.5 (umzekelo) ayenzeka. Nangona kunjalo, sebenzisa inani elipheleleyo leenombolo zeengxaki zomsebenzi wekhemikhali!
Ifomula elula kakhulu ye-butane yi-C2H5 kwaye ubunzima bayo be-molecule bu malunga ne-60. Yintoni i- molecular formula ye-butane?
Okokuqala, zibalo isisombululo samanani e-athomu ku-C2H5. Khangela phezulu i- atomic mass for the elements kwi- Table Periodic . Izibalo ze-athomu zifumaneka ukuba zi:
Ukufakwa kwezi manani, isisombululo sezibalo ze-atomiki zeC2H5 ngu:
2 (12.0) + 5 (1.0) = 29.0
Oku kuthetha ukuba ubuninzi be-butane ye-butane ngu-29.0.
Thelekisa umthamo wefomula (29.0) ukuya kumlinganiselo weeyunyuli (60). Ubunzima be-molecule bubaluleke ngokuphindwe kabini kwinqununu yesisombululo (60/29 = 2.1), ngoko ifomula elula kakhulu kufuneka yandiswe ngu-2 ukuze ifumane i-molecular formula:
ifomula ye-butane = 2 x C2H5 = C4H10
I-molecular formula ye-butane yiC4H10.
Iinkcukacha zamanzi ezinqabileyo kwaye ezinomdla
Ukuguqula iMicrometer kwiMitha
Kuphi iSulfure Efunyenwe KuLuhlu lwePeriodic?
Ukubhalwa kweNcwadi yeMbali yokuHlola
Uludwe lwe-Free C kunye neC ++ Compilers
Indlela yokudibanisa 'Prevoir' (ukuya phambili; ukuCwangcisa)
Uluphi uhluko phakathi kwe-'Aural 'ne' Oral '?
Umva wegama (amagama)
Iimpawu Eziqhakamshelayo Ngeentlanzi
Umzobo weCandelo loLuhlu